Inona ny Internet amin'ny zavatra? Inona no dikan'ny hoe Marketing? | Martech Zone
Inona ny Internet amin'ny zavatra? Inona no dikan'ny hoe Marketing?
Talata, Martsa 3, 2015 Zoma 17 Novambra 2017 Douglas Karr
Ny fifandraisana Internet dia nanjary zava-misy amin'ny ankamaroan'ny fitaovana. Ity dia hanana andraikitra lehibe amin'ny angon-drakitra sy marketing lehibe ato ho ato. Gartner dia naminavina fa amin'ny taona 2020 hisy fitaovana mihoatra ny 26 miliara mifandray amin'ny Internet. ] = [Op0-9y6q1
Inona ny Internet amin'ny zavatra
Ny zavatra dia manondro ireo zavatra izay tsy eritreretintsika hoe mifandray. Ny trano dia mety ho trano, fitaovana, fitaovana, fiara, na olona mihitsy aza. Hifandray amin'ny olona ny olona, ​​ny olona hifandray amin'ny zavatra, ny zavatra hifandray amin'ny olona, ​​ary ny zavatra hifandray amin'ny zavatra mandroso aza.
Ny famaritana Wikipedia dia:
Ny Internet of Things (IoT) dia tamba-jotra misy zavatra ara-batana na "zavatra" mifangaro amin'ny fitaovana elektronika, rindrambaiko, sensor ary fifandraisana mba hahafahany mahazo sanda sy serivisy bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fifanakalozana angona amin'ireo mpanamboatra, mpandraharaha ary / na fitaovana hafa mifandray. Ny zavatra tsirairay dia miavaka amin'ny alàlan'ny rafitra fikirakirana ampidirina ao aminy kanefa afaka mifandray ao anatin'ny fotodrafitrasa Internet misy.
Ny fepetra Internet-javatra dia nosoratan'i Kevin Ashton, mpisava lalana anglisy iray taona 1999.
Ny Internet of zavatra (IoT) dia hanana andraikitra lehibe amin'ny fomba fitarihantsika orinasam-pandraharahana sy amin'ny fampidirana vaovao amin'ny tontolo mifandray. Saingy manana fotodrafitrasa mety ve isika hamelana ny IoT hahatratra ny fahafaha-manao azy io? Ary vonona ve isika hijery ireo tombony lehibe azo avy amin'ny marketing nomerika? Mandehana mamaky ity infographic mampihetsi-po ity hahafantarana bebe kokoa momba izany. Source: Position²
Navoakan'ny olona ao amin'ny MindFrame, ity horonantsary ity dia fijerena miavaka amin'ny ho avin'ny Internet avy amin'ny IBM's Planeta maranitra, ireo fitaovana mampiasa Internet, ary ny eritreritra ny amin'ny hoavintsika eto amin'ity planeta ity miaraka amin'ny ranomasina angona angoninay. Na dia mivoatra haingana aza izahay avy amin'ny mpampiasa 1 lavitrisa amin'ny Internet ka hatramin'ny 2 miliara, ny isan'ny fitaovana dia mitombo amin'ny taha haingana kokoa aza. Ao an-tranoko manokana dia manana olona 2 aho, fa farafaharatsiny fitaovana am-polony!
Inona no ho vokatr'izany eo amin'ireo mpivarotra? Ny data isaky ny byte nalaina taminao zavatra afaka manampy anao hahatakatra tsara ny mpanjifanao hahafantaranao izay hafatra atosika ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana mety. Fanentanana be loatra (na dia amin'ny alàlan'ny zavatra) dia hanampy ny mpivarotra hitantana ny fifandraisana amin'ny fomba mahomby kokoa ary tsy dia mila filan-kevitra momba ny varotra faobe.
Tags: 2020planeta marani-tsaina kokoagartneraterineto ny zavatraiotkevin ashtonmindframe
Maninona ny antso anaty dia manakiana ny dian'ny mpanjifanao
BlueConic: Manangona, mampiray ary manatsara ny dian'ny mpanjifa